आमिर खानकी छोरीका उत्तेजक तस्वीरले तहल्का - Aajako Nepali Khabar
Aajako Nepali Khabar
No7Digital Khabar
Home मनोरंजन आमिर खानकी छोरीका उत्तेजक तस्वीरले तहल्का
आमिर खानकी छोरीका उत्तेजक तस्वीरले तहल्का
मनोरंजन admin December 4, 20200Comment
काठमाडौं आमिर खानकी छोरीका। आमिर खानकी छोरी इरा खान सामाजिक संजालमा सक्रिय छिन् । उनका तस्वीरहरु इन्टरनेटमा भाइरल भइरहन्छन् । एकपटक फेरि इरा आफ्ना फोटोका कारण चर्चामा आएकी छिन् । इराले हालै एउटा फोटोशूट गराएकी छिन् । फोटोमा उनले विचित्र पोजहरु दिएकी छिन् । उनको स्टाइल फ्यानहरुले धेरै मन पराएका छन् ।
केहि समय अगाडी इरा खानले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना प्रेमि मिशाल किर्पलानीसँग थुप्रै तस्वीर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । ती तस्बिरहरुमा उनीहरुको बीचको केमेष्ट्रि देख्न पाइएको थियो । इरा खानले एउटा प्रश्नको जवाफ दिँदै आफ्नो सम्बन्धको कुरा सार्वजनिक गरिदिएकी थिइन् । उक्त तस्बिर भाइरल भएपछि इराले सामाजिक सञ्जालमै थप केही तस्बिरहरु सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
इरा खानले नाटकमा डेब्यू गरेपछि निकट भविष्यमै उनी फिल्मकै निर्देशन गर्ने सम्भावना समेत अत्यधिक रहेको बताइन्छ । अहिले यो कुराको अनुमान मात्र लगाइएको हो । आमिर खानले पनि आफ्नी छोरीमा एउटा निर्देशकमा हुनुपर्ने प्रसस्त सम्भावना देखिएको एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएका थिए ।
नायक पल शाहलाई गरियो “रियल हिरो अफ दि इयर”बाट सम्मान
स्क्याम १९९२ भर्सेस बिग बुल : कहानी एउटै, नतिजा फरक
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित)
पाकिस्तानले ब्यान गर्‍यो मिया खलिफाको टिकटक अकाउन्ट
सुटुक्क माल्दिभ्स हानिएकी अभिनेत्री जाह्नवी कपूरलाई आइ पर्यो अर्को बिपत हेर्नुहोस [फोटो सहित ]
कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन बाँड्दै पल शाह
लकडाउनमा सँगै बस्न दिक्क लागेपछि महिलाले पतिलाई विक्रीमा राखिन्, घरवाहिर वोर्ड
अख्तियार प्रमुख राई उत्रिए एक्सनमा, कुलमान पहिलो निशानामा !
नेपाल,भारत र चीन जोड्ने सुरूङ मार्गको निजी क्षेत्रबाट सुटुक्कै शिलान्यास
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार २० गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
संसारलाई नै चकित पार्दै यी व्यक्तिले नाकबाट पानी पिएर आँखाबाट निकालेर मैन बत्ति निभाए , हेर्नुहोस्
© 2021 Aajako Nepali Khabar - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress